RW ku-xigeenka Dalka oo furay imtixaanka Shahaadiga ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA RW ku-xigeenka Dalka oo furay imtixaanka Shahaadiga ah
RW ku-xigeenka Dalka oo furay imtixaanka Shahaadiga ah
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Dalka ayaa maanta si rasmi ah u Daah-furay Imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga Sare, kaasi oo ka bilowday Muqdisho iyo Dowlad Goboleedyada.
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) raiisul wasaare ku-xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dahfurka imtixaanka,wuxuuna dhiira-geliyay rdayda u fariisanaysa guud ahaan imtixaanka Shahaadiga ah.
Imtixaanka Shahaadiga ah waxaa u fariistay Arday gaaraysa 31,500 oo Arday,sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda Waxbarashada XUkuumadda Soomaaliya mudane C/raxmaan Maxamuud Maxamed (Jaabir).
Amaanka goobaha imtixaankaasi lagu qabanayo ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee gobolada dalka ayaa siweyn loo adkeeyey,iyadoo loo xirsaaray ciidamo boolis ah,si ay ula socdaan habsami u socodka imtixaankani shahaadiga ah.
Wasiiru Dowlaha wasaaradda Waxbarashada XFS Mudane C/raxmaan Maxamuud Maxamed(Jaabir) oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa faah faahin ka bixiyay qaabka uu u dhacayo imtixaankaasi,wuxuuna xusay in aan la ogolaan doonin Arday mobile isticmaalaya,isagoona fariin u diray Ardayda,waalidiinta iyo laamaha ammaanka.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay maamulka imtixaanka guud ee dalka,muddo ku dhow 30 sano kadib tan iyo burburkii,iyadoona dadaal xoogan ugu jirta horumatrinta adeegyada waxbarasho ee guud ahaan dalka.
Previous articledil ka dhacay Muqdisho
Next articleXutiyiinta oo Ka Baxaya Xudeyda
Madaxweynaha Galmudug oo dib ugu laabtay Gaalkacyo (Sawirro
Maamulka Galmudug oo la tacaalaya daadad kusoo rogmaday Magaalada Dhuusamareeb